RBNIR - 04/11/2019 06:50
rhaj0 - 07/11/2019 03:52
RBNIR ilay dikan-teny frantsay no hitako mora hanazavana azy..
Tsara aloha rahefa tonga saina RbNIr hoe, kay misy "dika-teny SAMY HAFA" io Baiboly io,
- fa tsy hoe "izay voasoratradia voasoratra"
- na koa hoe "tenin'Atra" io.
Eny tokoa, nandika(dika) raki-tsoratra tonta daholo na frantsay na anglisy na gasy
ka dia io i RBNIR fa manao ity TSIMPONTSIMPONINA izay dika-teny mba mifanarka @ reviredin-dRbnIR
Dia NItsiMPONa ny dika-teny frantsay RBNIR. Ilay version inona no notsimponinao io ry RBNIR?
Ilay version gasy anie ry RBNIR, ka nadikan'i Andrianaivoravelona, izay nampian'ny fahazavan'ireo misionera t@ izany (sy ny bitsik'Atra) ary avy tamina baiboly anglisy sy grika, rakitsoratra antitra sy akaikin'ny original.
Ka dia nahilikilik'i RBNIR izany ilay hoe "Ao Ianao KANEFA", fa naleon-dRBNIR miondana ny an'ny Frantsay.
Izao ilay hoe (tia na te-ho) frantsay aloha ry RbNIR izay vao gasy
RBNIR - 07/11/2019 16:35
Manontany an'i rhajo i Jesosy?
Hatramin'izay nandinihinao ny baiboly izay....mba hitanao nambara tao v i Jesosy?
Inona ny antony tsy hanantonanao Azy mba hahazoano ilay fiainana mandrakizay?
rhaj0 - 07/11/2019 22:48
Childish hozy i Einstein izay.
Fa hendry kosa aloha nareo, toa ny zazabelelo matahotra pere noel, fa hoe fantatr'i pere noel sy jesosy raha vao maditra na manota eo, satria i pere noel sy jesosy samy mijery avy ao ambonimbony ao, ary amen'i pere noel sy jesosy kadou rahefa hendry
RBNIR - 12/11/2019 10:28
Ka na ny ntaolo aza ngeh rhajo efa nanana izao fahendrena izao e!
Aza ny lohasaha mangina no heverina, fa Andriamanitra ao an-tampon'ny loha
rhaj0 - 12/11/2019 20:58
RBNIR Aza ny lohasaha mangina no heverina, fa Andriamanitra ao an-tampon'ny loha
Aza afangaro ho'a ny revin'ny Ntaolo sy ny revy Kristiana. Kilasian'ny Kristiana (na ny olombeny) ho "manompo sampy" na "mivavaka amina Atra hafa" anie ny Ntaolo eee..
Io izao, ilay Andriamanitra an-tampon'ny loha an'ny Ntaolo, dia ilay "vadin'i Zanahary". Izay no resahana ao @ ity ohabolana.
Dia ao ianao izany ry RBNIR.. f'angaha ianao ataonao fa tsy hitan'i Jesosy (sy Pere Noel) izay "ao ambony ao" manao an'io?
RBNIR - 13/11/2019 07:55
Ny ntaolo izany dia efa nahafantatra ihany koa fa hoe misy MASO MIJERY ao ambony ao manara-maso ny zanak'olombelona (eny fa na dia any amin'ny takona tsy misy mahita aza)..
Tena mahagaga ahy mihitsy no tsy hahatsapanao an'io MASO MIJERY MIDINA io rhajo!
ao amin'ny Soratra Masina moa dia be dia be ny teny manamarina fa tena MISY IO MASO MIJERY IO....
« Fa ny mason'i Jehovah mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra, mba hisehoany aman-kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy. Adala ianao tamin'izany, ka dia hisy ady hahazo anao hatramin'izao. » (2 Tantara 16:9)
« Jehovah dia ao amin'ny tempoliny masina, ny seza fiandrianan'i Jehovah dia any an-danitra; ny masony mijery, eny, ny hodi-masony mizaha toetra ny zanak'olombelona. » (Salamo 11:4)
« Ny mason'i Jehovah amin'izao rehetra izao, Mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. » (Ohabolana 15:3)
« Fa iza no nanamavo ny andron'ny zava-madinika? Ho faly mahita ny pilao eny an-tànan'i Zerobabela ireo fito ireo, dia ny mason'i Jehovah, izay mijery eny tontolo eny eran'ny tany rehetra » (Zakaria 4:10)
« [Ny handravana ny firenena maro, sy ny voninahitra ho azon'i Ziona kosa] Teny faminaniana avy tamin'i Jehovah ny amin'ny loza hanjo ny tany Hadraka, Ary Damaskosy no hiharany - Fa ny mason'i Jehovah mandinika ny olombelona* Mbamin'ny firenena rehetra amin'ny Isiraely - [na: fa mijery an'i Jehovah ny mason'ny olombelona] » (Zakaria 9:1)
rhaj0 - 14/11/2019 02:31
rhaj0 Aza afangaro ho'a ny revin'ny Ntaolo sy ny revy Kristiana. Kilasian'ny Kristiana (na ny olombeny) ho "manompo sampy" na "mivavaka amina Atra hafa" anie ny Ntaolo eee..
RBNIR Ny ntaolo izany dia efa nahafantatra ihany koa fa hoe misy MASO MIJERY ao ambony ao manara-maso ny zanak'olombelona
Eny azany kouh... hay va re @ RbNIR dia mitovy kilasy
- ny mivavaka @ Atr'i Abrahama, sy
- ny mivavaka @ "sampy" sy "Atra ahafa" an'ny Ntaolo
SAMY MANAMA MASO MIJERY MIDINA AVY AO AMBONY AO.
Koa na i Pere NOel koa azany mba "MASO MIJERY MIDINA" avy ao ambony ao koa..
RBNIR - 14/11/2019 10:10
Tsy takatr'i rhajo v? aleo ary hazavaina tsara mihitsy e!
Ny ntaolo dia nahatsapa sy nahafantatra fa misy maso mijery ao ambony ao...
Nomeny Anaraka araka izay tiany io manana maso mijery io....
Taty aoriana nampahafantarina hoe Iza marina no fiantsoana an'io Manana maso mijery io....
« Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron'ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka, » (Asan'ny Apostoly 17:30)
Rehefa natoro fa hoe JEHOVAH no Anarany dia maro no nanaiky......
RBNIR - 14/11/2019 10:11
Fa izao hoy aho, averiko ihany, tahaka ireo ntaolo ireo tokony hahatsapa ny olona ankehitriny hoe misy MANANA MASO MIJERY AO AMBONY AO!!!
Dia tena gaga mihitsy aho fa tena tsy tsapanao ilay izy?????
RBNIR - 14/11/2019 10:21
« Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy; tsy misy manao ny tsara. » (Salamo 14:1)
Raha io teny io tokony hahatsapa ho azy ny tsirairay hoe tena marina misy manana maso mijery ao ambony ao.....
rhaj0 - 15/11/2019 00:35
Ireo animiste t@ andron-Jesosy koa dia "nino" fa misy MIJERY AVY AO AMBONY AO.
Fa nosoketain'ny olombe Kristiana fa "animiste" aty TSY ilay Atr'i Abrahama izany fa resa-kehy.
Ny an'i RBNIR kosa, ny nivavahan'ny Ntaolo, i Andmntra vadin'i Zanahary, dia cousin an'i Atr'i Abrahama angambany izany .
Sa ahoan RBNIR?
RBNIR - 15/11/2019 08:15
Izay ilay hoe aza mampiteny ahy zavatra tsy nolazaiko...
Hoy aho hoe, nahafantatra ny ntaolo fa misy manana maso mijery ao ambony ao...rehefa natoro an-drizareo ny anaran'ilay manana maso mijery ao ambony ao (JEHOVAH) dia maro no nino...
RBNIR - 15/11/2019 08:20
Araka io teny io dia tokony hahatsapa ny tsi11 hoe MISY ANDRIAMANITRA AO AMBONY AO!!!! izay no mahatonga ny olona taloha nanana bon sens "tsy tia nanao ny ratsy sady nanana "pudeur" na dia mbola tsy nampianarina aza ny finoana kristianina...
Ho an'ireo izay tsy manana izay fahatsapana izay kosa dia mazava ho azy amin'izireo dia azo atao daholo ny zavatra rehetra.....
rhaj0 - 15/11/2019 12:57
rhaj0 Ireo animiste t@ andron-Jesosy koa dia "nino" fa misy MIJERY AVY AO AMBONY AO.
Dia tena hilaza ianao fa, @ Malagasy, dia ilay Andrmntra vadin'i Zanahary inoany taloha, kay io lazainao RBNIR io fa i Jehovah-telo-sy-iray?
Izay ilay hoe aza mampino ny Malagasy zavatra TSY inoany
RBNIR - 15/11/2019 13:09
Vakio tsara aloha ny rakibolana rhajo vao miteniteny foana fa mamenatr'olona
rhaj0 - 17/11/2019 14:22
Ny ahy, ny Angano notantaraina tamiko, dia:
1- Andrmtnra sy Zanahary dia SAMY HAFA (fa tsy iray)
2- Ary i Andrmntra no vadin'i Zanahary. Ny voalohany ilay "andriana", dia ny faharoa ilay "niteraka/namorona"
Fa io moa samy manana ny tiany henoina.
Dia eritrereto tsara ao ry RBNIR, hoe inona ny Angano notantaraina taminao tao aa... Sa ianao TSY notantaraina Angano Malagasy fa tonga dia Biboly no nasesika taminao?
Fa izao no izy:
NOPASOHIN'NY FANJANAHAN-TSAINA ny Angano Malagasy hifandrindra @ Jehovah-3-no-1.
Izay no takatry ny Misionera hisintomany ny Malagasy. Ary nosavihin'ny Misionera sy Andrianaivoravelona mihintsy ilay anarana "Andrmntra", ary nakapony ho izay koa no anaran'i Jehovah-3-no-1.
Ianao ve tena mino fa "Jehovah-3-no-1" no inoan'ny Ntaolo Malagasy???
Dia tsarovy tsara anefa ny Didy Folo. Ary mazavabe fa "andriamanitra HAFA" ilay vadin'i Zanahary.
Ao aloha ianao ry RBNIR, dia ampiasao tsara ao ny coco, fa tandremo kely an...
Sirik'ireo Bainina "ao-ambony-ao" anie ianao io miteniteny foana io, sy io manana eritreritra misavoana ao io ry RBNIR eee..
Ataovy eo foana ho'a fa TSY hahazo kadou avy @ Jesosy sy Pere Noel eo ianao ry RbnIR an
RBNIR - 18/11/2019 07:14
Io ny rakibolana rhajo a! Ny Zanahary izay ninoan'ny ntaolo malagasy dia "Dieu créateur"
Ny baiboly koa dia mampianatra an'io Dieu Créateur io....
Ary tsy Iray teo tamin'ny famoronana fa maromaro hoy ny genesisy.....« Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. » (Genesisy 1:26)
RBNIR - 18/11/2019 07:16
P.S : i rhajo izany kay angano no inoany..... satria dia tena feno conviction ery ianao mamerimberina hoe Zanahary vadin'.....
Jj.be - 18/11/2019 08:58
nenareo koa sahiran-tsaina am'rajhO efa mirediredy sy tsy ampy fahalalana ioo..aleo ho eo..nefa aza matahotra ianao rajhO fa hivavaka ho anao aho fa tena tsy mahalala na inona na inona tokoa ianao fa hoetin'le fiovoarana any aminy Tsy izy. courage ianao